Tarika SAKAIZA - Tononkira Malagasy - serasera.org
Nampiditra : tiaana
Tamin'ny : 15/09/2004 10:06:32
Ny tarika Sakaiza dia efa niforona elaela ihany, telo lahy sy vehivavy iray no mpihira, efatra ny mpitendry zavamaneno ary tele vavy no mpandihy.
Efa nahvita album volume n°1 nytarika ka mitondra ny lohateny hoe: EFA FANTATRO, HAINAO.
Izy io dia capila manjelatra sy K7 izay misy hira roambinifolo.
Ny karazankira ataony dia mifangaro (variétés)
Ny fiainana andavan'andro, ny fitiavana, misy koa ny fiainampirenena no tantarainy ao anaty tononkira.
Raha ny tena marina dia mbola eo ampikatsahana ny fazahoantoerana eo @ vahoaka ny tarika.Na izany aza anefa dia efa manakoako any Toamasina,Majunga sy Morondava ny hirany, RTA Antsirabe koa efa nanaterana clips roa.
Efa nanao spectacle ny tarika efa maromaro ihany izay ary mampanantena fa mbola ho hitan'ireo izay tsy mbola nahalala azy ny tsanganasany @ fotoana mahamety azy!
AIZA HO AIZA!
EFA FANTATRO, HAINAO
nyvohary (24/07/2012 22:44:40)
Ny tena tsara dia aleo mamoaka clip @zay mora raisin'ny mpankafy ny sangan'asanareo,marina aloha fa tsy mora ny mamoaka clip fa izay no heveriko fa mampita haingana ny sangan'asa,dia mirary ny tarika sakaiza ho tonga @zay tanjona hirina
sity (02/12/2005 07:44:56)
Sao de mba misy manana ny tonon'ilay oe efa fantatro, hainao an'ny tarika sakaiza
tiaana (15/09/2004 14:06:32)